Igumbi eliluhlaza laseSingapore kwidolophu esembindini wedolophu - I-Airbnb
Igumbi eliluhlaza laseSingapore kwidolophu esembindini wedolophu
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguCityBackwoods
Yonwabela imfudumalo yolwamkelo lwale ndawo inesitayile, iphakamileyo kumbindi wesixeko. Njengendawo yokuhlala etofo-tofo le-boutique eli gumbi litofotofo neliphangaleleyo libekwe kakuhle kunye nazo zonke izinto eziluncedo ngendawo yokuhlala okanye yomsebenzi, ekuvumela ukuba uhlale kamnandi apho uqinisekile ukuba uyonwabela iingokuhlwa zakho kwaye ufumane ukuphumla okuhle ebusuku. Xa ilixesha lokuvula amakhethini kusasa uya kuvuya ukubona uhlaza ngaphandle kwefestile ukubulisa amehlo akho.
Lo mhlaba ukwisithili esixakekileyo, ngokuthe ngqo ecaleni kweNdlela ye-Arterial yesixeko, njengenxalenye yendawo yokuhlala ezolileyo, ekhuselekileyo nekumgangatho ophezulu.
Ukufikeleleka ngezitepsi kunye ne-elevator, eli gumbi libekwe kwindawo ehlukeneyo, ephakanyisiweyo yomgangatho we-3rd ngaphandle kweendawo ekwabelwana ngazo, okuvumela ubumfihlo obuninzi kunye nokuzimela.
Eli gumbi litofotofo linebhedi enkulu yokumkanikazi enelinen entsha yebhedi, eneetafile ezisecaleni kwebhedi & nezibane, igumbi elikhulu lokwakhela ngaphakathi kunye nendawo eninzi yegunjana.
Kukho idesika encinci yokubhala xa ufuna ukukrazula nawuphi na umsebenzi ngelixa useholideyini.
Igumbi lifakelwe isizukulwana esitsha sescreen esikhulu se-smart LED TV, amandla aphezulu okulawula isilingi fan kunye ne-conditioner yokupholisa ekhawulezayo yokwahlula umoya. Ubusika obuphezulu, izifudumezi zegumbi ziyafumaneka kwimfuno.
Phakathi kwezinye izinto eziyimfuneko, inefriji yokugcina ukutya kunye nesiselo kunye nomenzi wekofu yeti.
Ixhotyiswe ngegumbi lokuhlambela elikhulu labucala, kunye nebhafu eshushu epheleleyo eneshawari yemvula kwakunye neshawa yesandla. Iitawuli ezitsha kunye nezinto zangasese ezibalulekileyo ziyinto eqhelekileyo.
Lilonke, Ibonelela ngokuzonwabisa kunye nabahambi beshishini indibaniselwano yentuthuzelo, lula kunye nobunewunewu kwizinto zangaphakathi eziyilwe ngoku kwaye ziyilwe kakuhle. Nge-intanethi ye-wifi enesantya esiphezulu kunye nommandla onoxolo, le ndawo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala kunye nomsebenzi ovela kwiingcali zasekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- CityBackwoods